မြင့်မားသောခါးပတ်ဖုံးကွယ်ထားသောပရင့်ထုတ်ရန်အမျိုးသမီးဝတ် Leggings - ပို့ဆောင်ခအခမဲ့နှင့်အခွန်မပါ | WoopShop®
ခါးမြင့် camouflage ပုံ နှိပ်၍ အမျိုးသမီးဝတ်ဘောင်းဘီ
အရောင် CGray အဖြူ CGreen ခရမ်းရောင် နှင်းဆီ
CGray/S CGray/M အဖြူ / S က အဖြူ / M က CGreen/L CGreen / XL CGreen/S CGreen/M CGray / L CGray / XL ခရမ်းရောင်/S ခရမ်းရောင်/အမ် RoseRed/L RoseRed/XL RoseRed/S နှင်းဆီနီ / M အဖြူ / L ကို အဖြူ / XL ခရမ်းရောင်/L ခရမ်းရောင် / XL
မြင့်မားသောခါးပတ်ဖုံးကွယ်ထားသောပုံနှိပ်အမျိုးသမီးများအတွက် Leggings - CGray / S backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
Spandex: Spandex (၁၀% -10%)
အရှည်: ခြေကျင်း - အရှည်
အာရှ Size ကို ခါး တင်ပါး အရှည် ပေါင်
မှတ်ချက်။ လက်တိုင်းတာခြင်းသည် ၁-၃ စင်တီမီတာ၊ ၁ လက်မ = ၂.၅၄ စင်တီမီတာ၊ ၁ ပေါင် = ၀.၄၅၃ ကီလိုဂရမ်ခန့်ကွာခြားမှုရှိလိမ့်မည်။
ဒီပစ္စည်းကိုတစ်နေရာတည်းကမှာကြားပြီးကျွန်မရဲ့အခြား legging ကိုမှာခဲ့တယ်။ ငါမှာထားတာထက်ပိုသေးငယ်အောင်လုပ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါဒီထုတ်ကုန်ကသေးသေးလေးလို့ထင်ရပေမဲ့၊ အဲဒါကြောင့်ပုံနှိပ်တာကတော်တော်ကိုဆန့်ထုတ်ပြီးစျေးသက်သာတယ်။
စုံလင်စွာထိုင်ပါ !!! အရွယ်အစားအတွက်! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်))) Leggings များသည်အရွယ်အစားနှင့်လုံးဝလိုက်ဖက်သည်။ ငါသူတို့အတွက်သင်တန်းသွား